စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေခံအလွှာကဘာလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > Assos အခြေစိုက်စခန်းများ - မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
Assos အခြေစိုက်စခန်းများ - မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
le ဗိုလ်မှူးကြီး Pro ကိုကွက်။
Assos Skinfoil နွေရာသီ။
Sportful Bodyfit Pro ကို။
Rapha Merino ။
Endura Translite ။
ဂိုး Windstopper ။
ဆောင်း ဦး ရာသီသည်အပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားရှိသောအချိန်ကာလဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသောနေ့ရက်များရှည်လျားသောညများဖြစ်သည်။ ငါပြောင်းလဲနိုင်သောရာသီဥတုကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အရာအားလုံးသည်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်ပြproblemနာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဝတ်ဆင်ထားသည့်အရာကျွန်ုပ်တို့သည်တံခါး ၅ တံခါးသို့တက်ပြီး ၁၅ ခါလောက်ပြန်လာကြသည်။ ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုအကြံဥာဏ်တွေပေးမယ်။ ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ရောင်စုံရာသီဥတုကိုသင်အပြည့်အဝရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆောင်း ဦး ရာသီသည်အပူချိန်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲပေးသည်ကိုသိသောကြောင့်အအေးမြည်သောနံနက်ခင်းတွင်တခါတရံပူသောနေ့လည်ခင်းတွင်ပူနွေးပြီးနေ ၀ င်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တော်တော်လေးပူပြင်းလာသည်၊ သို့ဖြစ်ရာဤအပြောင်းအလဲများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဝတ်ဆင်ကြမည်နည်း။ အကောင်းဆုံးအစွန်အဖျားကတော့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်စစ်ဆေးခြင်းကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာပြောင်းလဲနိုင်သောနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဖမ်းမိခြင်းမရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ သင်နေရောင်ခြည် ထွက်၍ မိုးရွာရွာထဲသို့ပြန်သွားနိုင်သည်တံခါးကိုမထွက်ခွာမီသင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဆိုလိုတာကနေရောင်သည်အပြာရောင်တောက်ပနေသည့်ဤနေရာသို့ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူကေတွင်ဖြစ်သည်။ စောစောစီးစီးမပြောပါနဲ့၊ သင်မည်မျှစီးနင်းရမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားသောတောင်တက်မှုကိုကြိုးစားအားထုတ်လျှင်မည်သည့်အမြန်နှုန်းဖြင့်စဉ်းစားမည်နည်းဥပမာ Connor အပူချိန်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူစက်ဘီးစီးသူများသည် Layers Layers နှင့်ပတ်သက်သောကြက်သွန်နီများကဲ့သို့တစ်ချိန်ကပြောသည် Layers Layers ငါထပ်မံမပြောဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါကကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးကတိပြုသည်။ အလွှာရှိခြင်းသည်သင့်အားရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်ငါပြောင်းလဲနိုင်သောရာသီ၌ပြောင်းလဲနိုင်သောရာသီဥတုကိုဆိုလိုသည်မှန်ပါသည်၊ အပူချိန်ကျသောအခါအလွှာ (၂) ခုတွင်အပူလွန်စွာအလွယ်တကူရနိုင်သည်။
ငါကကြက်သွန်နီနဲ့တူပြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အင်္ကျီတွေ၊ အင်္ကျီတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီ t အောက်မှာအမြဲတမ်းဝတ်လေ့ရှိတယ်။ ဟေး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးအလင်းရောင်မှရှည်လျားသောအင်္ကျီအထူအထိရှိသည်။ တကယ်ကိုအအေးမိတာနဲ့ချွေးထွက်သွားအောင်လုပ်ပေးချင်တယ်လို့ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲစီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိုစွတ်အောင်မလုပ်ချင်လို့ပါ။ နောက်တော့စီးနင်းနေစဉ်နောက်ပိုင်းမှာသင့်ကိုအေးသွားစေမှာဖြစ်ပြီးသင်လည်းမလိုလားအပ်တဲ့ပုံဖော်ခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားချင်တယ်။ ဒီအင်္ကျီတစ်ထည်ကိုသင်မ ၀ တ်ပါကအင်္ကျီမ ၀ တ်ပါကသင်လုံးဝမလိုချင်ပါ၊ အားလုံးစီးနင်းလိုက်ပါလာသည့်ကမ္ဘာ၏မည်သည့်အပိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ သင်ပူနွေးသောရာသီဥတုတွင်နေလျှင်လက်တိုအင်္ကျီတို Hankis ကအခုဝတ်နေတယ်လိုပဲရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအေးခဲတဲ့ရာသီဥတုမှာရောက်နေရင်လက်ရှည်ဂျာစီကဒုတိယအလွှာလိုပဲလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းမှာတစ်ခုရှိရင်ငါဒီလိုလက်တိုအင်္ကျီတိုဝတ်မယ်ဆိုရင်ငါပြောမယ်။ , လက်ပူနွေးတရံနှင့်အတူသင်နှင့်အတူယူလာပါလက်လက်ပူနွေးအကြောင်းကိုအလွန်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်၏ သူတို့ဟာ ၀ တ်ဆင်ရတာလွယ်ကူပြီးသင်တံခါးအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးလေးလေးလေးထားပေးတာကသင့်လက်တွေစက်ဘီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးအပူချိန်ကနေထပ်မံကျဆင်းလာတဲ့အခါသင့်ကိုသူတို့အေးအောင်အေးစေတယ်။ နွေးထွေးသောလက်များနှင့်ပူနွေးသောလက်များသည်အပူချိန်ပူလာသောအခါ၊ ပြန်လည်စီးနင်းရန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏စီးနင်းလိုက်ပါလာသောအခါသူတို့ကိုလှိမ့ ်၍ နောက်ကျောအိတ်ထဲပြန်ထည့်နိုင်သည်။ အ ၀ တ်အထည်များ၊ သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အ ၀ တ်အစားများ၊ ချွတ်ယူရန်မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းစွာစစ်ဆေးသင့်သည်။ သင့်ခြေထောက်ပူနွေးစေမည့်အရာများကိုသင်လျင်မြန်စွာဖယ်ထုတ်ပြီးသင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌အိတ်ထဲထည့်ထားပါကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ဇစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်ကံမကောင်းတာကခြေထောက်ပိုတိုတဲ့သူတွေထက်ပိုကြာနိုင်တယ် ၁၃ စက္ကန့် ၁၃ စက္ကန့်သာလျှင်တဲတစ်လုံးတည်းသာလျှင်အသင့်ရှိနိုင်သည် ချက်ချင်း conds ချက်ချင်းပဲကျောပိုးအိတ်၊ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ၂၅ စက္ကန့်လောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လှိမ့်လိုက်မယ်။ မင်းခြေထောက်မှာလေထဲမှာရှိနေတယ်။ အမွေးထူပေါင်တွေပြည့်နေပြီ။ ငါဒါကိုလုပ်ပြီးပြီ၊ သင်အိမ်သာသို့သွားရန်အချိန် ၃၆ စက္ကန့်။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌အချို့သောမိုးရေများရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်စိုစွတ်ရန်မလိုချင်ပါကစျေးကွက်တွင်မိုးရေအလုံအလောက်ရှိသည့်အတွက်လျောက်ပတ်သောမိုးကာအင်္ကျီကို ၀ ယ်ရန်အကြံပေးသည်။ သို့သော်သင်အလွယ်တကူလှိမ့်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့နောက်ကျောအိတ်ကပ်ထဲမှာ fit ။ မိုးရေကျည်ကြီးတစ်ခုသည် windstopper အလွန်ကြီး။ သူ၏နောက်ကျောအိတ်ကိုအလွယ်တကူဖုံးအုပ်နိုင်ပြီးသင်ကအောက်ထပ်လမ်းနှင့်အအေးမိနေလျှင်၊ ခြေနင်းမစီးပါကသင်၏စီးနင်းခြင်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအတွက်နွေးစွာနေပါကအလွန်ကောင်းသည်။ ငါတို့ရဲ့အထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနွေးထွေးစေပြီးခြောက်သွေ့စေရုံသာမကငါတို့အစွန်းရောက်စရိုက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားချင်တယ်၊ စက်ဘီးစီးပြီးခြေထောက်ပေါ်စီးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးအအေးနဲ့စိုစွတ်တဲ့ခြေထောက်တွေရခြင်းထက်ပိုဆိုးတာမရှိဘူး။ ငါနဲ့မတူတာကမင်းတို့သူတို့ကိုစီးနင်းလိုက်ပါ၊ မင်းမစီးခင်သူတို့ကိုဝတ်ထားပါစေ၊ ပြီးတော့ငါကဒီဖမ်းမိထားတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကနေအကြမ်းဖက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမိုးရေတွေကောင်းကောင်းလာတဲ့အခါရေတွေအများကြီးကျန်စေနိုင်တယ်၊ နူးညံ့။ ခြောက်သွေ့နေသလား။ ကောင်းပြီ၊ သန့်ရှင်းတယ်ဟုတ်တာပေါ့ငါမပြောနိူင်ဘူးလို့ငါပြောတာမဟုတ်ဘူးကားမောင်းတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ဒီကားကိုအလယ်မှာမထားသင့်ဘူး။ ငါတို့နေတဲ့အသင်းနဲ့နေပြီးသင်ယူပါ။ အဆင်ပြေအောင်သင်ယူပါ။ ငါတို့လက်တွေ၊ လက်အိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။ ကျမစီးကျတဲ့စီးနင်းတာဟာတကယ်ကိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့စုံတွဲတစ်တွဲကမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်စုံတွဲတစ်တွဲကိုရှာပါ။ ဒါကသင့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွေအများကြီးချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပြီးပါးလွှာတဲ့တွဲတစ်စုံကအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားပူနွေးလာရင်မင်းရဲ့အိတ်ကပ်ထဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာ၊ ခန္တာကိုယ်အပူချိန်နဲ့လေထုထဲမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အခါတကယ်တော့သင်ဟာအအေးစားချင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ မင်းမှာအချိန်မရှိလို့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အပူချိန်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်မင်းဟာအပြင်ထွက်ပြီးဒီလှပတဲ့အချိန်ကိုပျော်မွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
စက်ဘီးစီးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်၏အကြိုက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုနှစ်တွင်ဤအချိန်၌ကောင်းကင်၌အနည်းငယ်နိမ့်ကျနေပြီးမြင်နိုင်လောက်အောင်မကြီးလှသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှမြင်နိုင်ရန်ကြိုးစားပါ။ နွေရာသီမှာအလင်းရောင်တောက်ပတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ပါ။ ပြီးတော့သင့်စက်ဘီးကိုအလင်းရောင်ထည့်နိုင်ရင်လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့အခါလုံခြုံစိတ်ချရနိုင်ပါတယ်။ သင်ဤဆောင်းပါးကိုနှစ်သက်ပြီး၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရာသီတစ်ခုကိုစီးနင်းစဉ်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဤမေးခွန်းအချို့ကိုဖြေဆိုရန်ကူညီနိုင်ခဲ့သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါး၏မှတ်ချက်များကဏ္sectionတွင်ဤဆောင်းပါးကိုအကြံပြုခဲ့သည့်အတွက် Theo Hester အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုလွဲချော်ခဲ့လျှင်၊ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာမမေ့ပါနှင့်၊ အကြီးအကျယ်ပေးပါ၊ အကြီးအကျယ်လက်မလျှော့လိုက်ပါနှင့်၊ fastyeah သူတို့ပိုကောင်းသော buddy ရှိနိုင်ပါသည် meso များအတွက် bein ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏
ဘောလုံးသမားသည်အဘယ်အခြေခံအလွှာများ ၀ တ်ဆင်သည်။
Nike Pro ။ အခုဝယ်ပါ။
အရေပြား DNAmic Force ။ အခုဝယ်ပါ။
Armor HeatGear Armor လက်အောက်တွင်ရှိသည်။ အခုဝယ်ပါ။
Adidas Alphaskin အားကစား Tee ။
Nike Pro ကို Hypercool ။
အရေခွံ A200 ချုံ့။
ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့်ဤကစားသမားလိုလားမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်မည်သည့်ကစားသမားသည်သူတို့အသုံးပြုနေကြောင်းသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ ငါ hacks များကိုရှင်းပြမည်သို့မဟုတ် PSG တွင် Mario Kart II နှင့်ကစားခြင်းသည်ယခုမည်မျှထိရောက်မှုရှိကြောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်။ သူသည်ကတ်ကြေးများထုတ်ယူရန်နှင့်ဤနေရာတွင်ဇာအဖုံးကိုဖြတ်တောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောကြောင့်သူသည်ဖိနပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာမရှိသည့် Nike Phantom အဆိပ်များကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ဖိနပ်ရဲ့နှစ်ဖက်ကြားတင်းမာမှုကိုထိန်းထားနိုင်မယ့်အရာတွေထဲမှာတော့ Bacardis ကဒီမှာလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလို့မင်းထင်တဲ့ကြိုးတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားတစ် ဦး အမှန်တကယ်ရှေ့ဆက်သွားပြီးသူတို့အတွက်ပြုလုပ်ရန် Tootsboots ကိုတောင်းဆိုသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်၊ ဒီ hack itcar DS ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ shoelaces တွေကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာ shoelaces တွေကိုကိုင်ထားတဲ့ Flywire ကေဘယ်ကြိုးတွေကိုဖော်ထုတ်မှာဖြစ်လို့ခင်ဗျားမှာလည်းတူညီတဲ့တင်းမာမှုမရှိဘူး။ ငါထင်တာကတော့ Auto D ဒါကိုသဘောကျရင်တောင်ဒါဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်နောက်လာမည့် hack ကိုကလပ်အတော်များများကအသုံးပြုသည်။ Cleatspro Boot Steamer ကဒါကိုပြုလုပ်ပြီးဝယ်ယူလိုက်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ် MLS ဥရောပအသုံးပြုမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များဖြင့်အသင်းတစ်သင်းလုံးကိုခုတ်ထွင်နိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းလှပါသည်။ ခြေစွမ်းမြင့်မားသောကစားသမားများအတွက်လည်းကောင်းသည်။ အခုတော့ Shaqiritoni kroos ကိုသင်မုန်းတီးသောကစားသမားတော်တော်များများကအသုံးပြုနေတဲ့နောက်လာမည့် ဦး ထုပ်ကိုကြည့်ပါမယ်။ သင်ဟာ shin အစောင့်ငယ်များကိုတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုသဲလွန်စဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိူင်မည်။ သေးငယ်သော shin အစောင့်များတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်သောမတ်စ် Muller ကိုအမှန်တကယ်သိကျွမ်းခဲ့သည်။ သို့သော်ကစားသမားများသည်အားကစားခန်းမ pad များမဝတ်ဆင်ပါဟုအဘယ်ကြောင့်ထင်သနည်း။ သူတို့ဟာသူတို့ငယ်ငယ်လေးတွေကိုသူတို့ငယ်ငယ်လေးနဲ့သယ်ဆောင်သွားမှာပါ၊ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာပိုပြီးဒဏ်ရာရစေပါတယ်။
ကျနော်တို့ကကစားသမားတစ် ဦး ဟာကိုင်တွယ်မှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုလို့မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Shin အစောင့်တွေဝတ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကစားသမားအနည်းငယ်ပဲကစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့အတွက်အကျော်ကြားဆုံးကစားသမားကတော့ Marko RoyceBritish Dortmund ပါ။ ဂျာမနီအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤပုံများမှသင်ပြောနိုင်ပါကသူသည်သူ၏ Puma Futures ကိုချွတ်ပစ်လိုက်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူသည်မတူသော Pubic Futures စုံတွဲဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအရာသည်ဤဘွတ်ဖိနပ်သည်၎င်းအတွက်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇာအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများတွင်ဇာများကိုညှိရန်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၊ သင်သည်သင်၏ခြေထောက်ကျယ်ပြန့်ခြင်းရှိပါကသင်အမှန်တကယ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သော်လည်းဤဆောင်းပါးတွင်အမှတ်တံဆိပ်သည်သူ့အတွက်ဖိနပ်တစ်ရံဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုသတိရပါ bespoke ဘွတ်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ကစားသမားများသူ၌သူ၏ဖိနပ်ထဲတွင်ရှိနေခြင်းနှင့်သင်ဤဆောင်းပါးကို Insideboots မှဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြသမည်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုသင်မမြင်နိုင်သောပိုမိုကောင်းမွန်သောချုပ်ကိုင်ထားရန်အပိုပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ အခုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုကောင်းအောင်ကြည့်ပါ၊ ငါတို့ကြည့်နေသောနောက်ထပ် hack သည်တစ်နည်းနည်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် Mer boot, ဒါကသင့်ရဲ့ Boot boot အသစ်ကိုပျော့ပျောင်းစေတဲ့နည်းတစ်နည်းပဲ။ ဒီတော့ Fir'aun အသစ်စက်စက်ဒီနေရာမှာတံဆိပ်တွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ငါသေတ္တာအသစ်ကိုအသစ်စက်စက်ထုတ်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်အိမ်မှာမင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကခြေစွပ်ကိုဝတ်ထားတဲ့ရေချိုးကန်ကိုဖိနပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးအဲဒါကိုလည်းရေချိုးကန်ထဲစုပ်ယူလိုက်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အဲဒီမှာရောက်နေလို့သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိပြီးမင်းဝတ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဖိနပ်ကိုရေချိုးခန်းထဲထည့်ပြီးမိနစ် ၂၀ ထားပါ။ ပြီးတော့သူတို့ကအရမ်းကောင်းပြီးပျော့ပျောင်းလာလိမ့်မယ်။ အပြင်ထွက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ကစားလို့ရတယ်၊ သူတို့ကိုသွားနိုင်ရုံသာမကသင်ခြေထောက်ပုံသဏ္aroundာန်ကိုပတ်ပတ်လည်မှာခြောက်သွေ့စေပြီးအအေးလည်းပေးနိုင်ပါတယ်၊ သင်ပြီးသွားတဲ့အခါသင်သေချာအောင်လုပ်ချင်တယ် စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သတင်းစာစာစောင်တစ်ခုလုံးကိုထည့်ပါ၊ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်နောက်မှကောင်းမွန်စွာခြောက်သွေ့သွားစေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်များပြားလာလိမ့်မည်။ ရေတွင်ပါဝင်ခြင်းနှင့်အခြားကစားသမားအချို့နှင့်၎င်းတို့ကိုအဝတ်မဝတ်မီသင်စိုထိုင်းမှုအားလုံးကိုထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ တကယ်တော့ဒါကိုလုပ်ပါ၊ PCboots UK ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ Ross Barclays ဘောလုံးကနေဒဏ်ရာအချို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ် boots သင်တစ်ကိုယ်တည်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုတွေ့မြင်။ ဤခိုင်မာသည့်အောက်ခြေဘွတ်ဖိနပ်များကို soft boots အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ပလပ်စတစ်လုံးအစွန်အဖျားကိုဖြတ်နိုင်ပြီးဖိနပ်အတွင်းပိုင်း၌ကပ်နေသောအပေါက်တစ်ခုသည်စင်တီမီတာ၏ချည်မျှင်များထဲသို့ ၀ င်သွားပြီး၎င်းကိုဖြတ်သန်းသွားရန်အမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းသည့်အကြံဥာဏ်ဖြစ်ပါက၎င်းကိုထည့်သွင်းလိုက်သည် သင့်တွင် Soft Ground သို့မ ၀ င်သောဖိနပ်များရှိသည်။ အကယ်၍ သင် boot ကိုသင် soft art ၌လိုချင်လျှင်၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော Toots boots ၏ပုံအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။ အထူးထုတ်ဝေမှုများတွင်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ကစားသမားတွေကဒီဖိနပ်ကိုရယူပြီးဖိနပ်တစ်လုံးလုံးကိုသုံးချင်ကြတယ်။ သူတို့ကနူးညံ့ပျော့ပျောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်လို့မရဘူးဆိုတာမင်းမြင်နိုင်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် Memphis depay ကတဆင့်တကယ်ကိုကျော်ကြားလာတဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တစ်ခုပါ။ ဤပုံတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် JackGrealish, ဤပုံတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်ဤကွဲပြားခြားနားချက်မှာသူတို့ ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ တကယ်တော့တိုတောင်းသောခြေအိတ်ငါတကယ်မကိုင်တွယ်နိူင်ပါဘူး။ ဒါကအဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ ကစားသမားတွေဟာနွားသငယ်တွေအပေါ်မှာကန့်သတ်ချက်တွေခံစားနေရတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်း၊ အခုသူတို့လုပ်ရမှာကခြေအိတ်တိုတိုဝတ်ပြီး shin အစောင့်အနည်းငယ်ကိုသာဝတ်ဆင်တာပါပဲ။
ကစားသမားတွေကဒီဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်၊ ဒီonlyရိယာမှာကန်ခံနေရတာ၊ ရှူးဖိနပ်အောက်မှာဒါမှမဟုတ်ခြေနင်းအောက်မှာမရှိဘူး၊ ဒါ့ကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မဟုတ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ ရနိုင်ပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတော့ဒါဟာသိပ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ အဲဒီခြေအိတ်ထဲမှာတိုတောင်းတဲ့ Shin Pad ကို ၀ တ်ဖို့တော်တော်လေးစိတ်မသက်မသာဖြစ်မိတယ်၊ ငါဟာအစားအစာထဲကိုတူးနေသလိုပဲ၊ နောက်တစ်ခုရှာနေတာပါ။ at ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဒါကအကွက်ထဲမှာပေါ့။ ငါတို့ကကာဗွန်ဖိုက်ဘာအကြောင်းပြောနေတာပါ။ အခုသင်မြန်မြန်ပြေးလာမယ်၊ ဤရွေ့ကား NFL ဘတ်စကက်ဘောတွင်လူကြိုက်များသည့် Victory Performance အတွင်းခံများဖြစ်သည်။ ယခုနောက်ကွယ်တွင်စိတ်ကူးမှာသင်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြေးနိုင်လျှင်မြန်မြန်ပြေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အားကစားသမားတစ် ဦး ဖန်တီးသောစွမ်းအင်ကိုပထမဆုံးပြန်လည်အားဖြည့်စေသောအားကစားပစ္စည်းဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကခြေထောက်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့အားကစားသမားရဲ့အမြင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဘယ်လောက်အင်အားဘယ်လောက်အထိအားစိုက်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိဖို့သူတို့ကသင့်ကိုကိုက်ညီမယ့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စက္ကူတစ်ခုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
သူကသူ့ဖိနပ်မှာကာဗွန်ဖိုက်ဘာကိုဝတ်ရတာကြိုက်တယ်၊ အရင်ဘွတ်ဖိနပ်တွေမှာလည်းကာဗွန်ဖိုင်ဘာတွေသုံးထားတယ်၊ အဲဒီမှာပန်းကန်တွေနည်းနည်းကွဲပြားတယ်၊ တကယ်တော့ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအူကြောင်ကြောင်၊ အကျိုးမရှိဘူး သင့်ရဲ့စံကနေတစ် ဦး တည်းသော၌တည်၏, ဒါပေမယ့်ဒီအားလုံး mak အကြောင်းပါ။ သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပေါက်ကွဲစေနိုင်လျှင်မြင့်မားသောခုန်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ယခုအခါအိမ်လုပ် hack နည်းနည်းသာဖြစ်သော်လည်းသူမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသော boot steamer တွင်သူကြိုးစားခဲ့သည်မှာ DIY boot ဖြစ်သည်။ သင်ရေပုံးတစ်ပုံးကိုယူသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုရေချိုးခန်းထဲမှာထားချင်တယ်၊ အယူအဆကအဲဒီဖိနပ်တွေကိုမိနစ် ၂၀-၃၀ လောက်မှာရေနွေးငွေ့သွားအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​မင်းမှာအဲဒီမှာရေပူရှိတယ်၊ အဲဒီဖိနပ်တွေကိုမိနစ် ၂၀ ကနေနာရီဝက်လောက်ကြာအောင် vape လုပ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုထုတ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ခြေထောက်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးအအေးခံပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုဒီလိုမျိုးမကျစေဖို့သတိထားပါ၊ ပြီးတော့သူတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုစွတ်ကြလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အယူအဆကတော့၊ သူတို့ဟာတကယ်ကိုရေမစိမ်ဘဲသူတို့ကိုရေထဲမစိမ်ဘူး ။ သူတို့ကို CleatPro boot steamer နည်းနည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗားရှင်းကဲ့သို့မထိရောက်ပါ။ သေချာသည်။ နောက်လာမည့် hack ကိုဂျက်ဗြိတိန်ကလူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဟောင်းနွမ်းသော Hyper Venoms စုံတွဲသည်သင်မြင်နိုင်သည်ဆိုပါက Nike အား Hyper-toxic များနှင့်ခွဲခြားထားခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည့်ဂိမ်းတွင်၎င်းတို့ကို ၀ တ်ဆင်ရန်စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့ကိုသင်ဂိမ်းတွင် ၀ တ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ သူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအကုန်က PLAYOFF ဗိုလ်လုပွဲမှာ ၀ တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဒီဂိမ်းနဲ့ဆင်တူတဲ့ကစားပွဲမှာဘွတ်ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ထားတယ်၊ သူဟာအဆိပ်မျိုးကိုဝတ်ထားတယ်၊ သူတို့ကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်။ ဖိနပ်တွေပေါများတယ်။ လူတိုင်းကဂိုးတွေသွင်းယူတယ်။ ဂိုးတွေသွင်းတယ်။ သူတို့လိုပဲသူတို့ရဲ့ PLAYOFF ကိုသယ်ဆောင်ရမယ်လို့မခံစားရဘူး။ Jag Rilashe နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူသီးမှုတွေကကျွန်တော့်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားစေတယ် အနားယူပြီးသောအတွေးအခေါ်များ၊ ကောင်းပါပြီ၊ နောက်လာမည့် hack ကို Cristiano Ronaldo မှကျော်ကြားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးကြုံတွေ့ဖူးသောပထမဆုံး boot hack ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ရေပူရေလှောင်ခြင်းကြောင့်လူသိများခဲ့ပြီးသူသည်စူပါအဆက်အသွယ်အမျိုးအစားများကို ၀ တ်ဆင်သည့်အခါသူကစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာဒီနေ့ခေတ်ထက်ပလတ်စတစ်နည်းနည်းပိုရှိတာမို့သူဟာပျံသန်းတော့စရာမလိုတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်ကပိုချုပ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ဖိနပ်နဲ့တူတယ်၊ အကယ်၍ သင်ကပူနွေးသောရေကိုသူတို့အသုံးပြုခဲ့လျှင်သူတို့အပေါ်ပိုင်းပျော့ပြောင်းပြီး ပိုပြီးမြန်ဆန်စွာဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဖိနပ်ကိုပျော့ပြောင်းစေ။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဝတ်ဆင်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည့်အတွက်အလွန်ပူပြင်းလွန်းသဖြင့်ဂိမ်းကစားသူများက၎င်းကိုမသုံးကြပါ။
မင်းတို့မှာငါတို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ C leatsteamer ရှိပါသလား။ ဒါဆိုမင်းတို့အစားထိုးသုံးနိုင်တယ်။ ဖိနပ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာပျော့ပျောင်းအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအကွက်ထဲကနေသူတို့ဟာပိုပြီးပျော့ပြောင်းပြီး။ သင် ၀ ယ်သောအခါဘွတ်ဖိနပ်သည်အနည်းငယ်တောင့်တင်းသည်ဟုခံစားရသောပြproblemနာတစ်ခု, သင်ရေပူလှည့်ကွက်ကိုသေချာစွာစဉ်းစားပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုဝတ်ဆင်။ အနည်းငယ်ခွဲပါ။ ၎င်းသည်သင်ထည့်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာလျင်မြန်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဖိနပ်ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မင်းတို့ပလတ်စတစ်တွေကိုအရည်ပျော်အောင်လုပ်ပြီး၊ အဲဒီအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့သတင်းစာတချို့နဲ့စနစ်တကျခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပေးချင်တယ်။ ငါတို့ကအစိုဓာတ်ကမင်းကတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးထွက်ချင်တဲ့ဘောလုံးဘွတ်ဖိနပ်ရဲ့ရန်သူလို့ပြောတာ။ မင်းတို့ဒီ hack တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားပြီးပြီ။ ဒီတော့နောက်တစ်ခေါက် shimpads ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပါ ဦး ။ ဒီတစ်ခါမှာဒီမှာ Carbonathletic ရှိတယ်။ Shin အစောင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ chinn အစောင့်တွေဟာလိုလားတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးပါ။ ငါတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကအကြေးခွံတွေပေါ်မှာပစ်ထည့်လိုက်တာငါတို့ Big Adult Shin Pad ပါ။ ၂၅ ဂရမ်လောက် ၀ န်းရံပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကပလပ်စတစ် shin pad ကိုယူပြီး ၆၀ ဂရမ်ကိုကြည့်ပါ။
ဒါကအတော်လေးကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ပါ။ ဆိုလိုတာကမင်းမှာ shin pad ရှိရင်အဲဒါကိုသင်ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ သေးငယ်သော shin pad များ ၀ တ်ဆင်သောကစားသမားအများစုသည်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာသို့ပြောင်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဝေးဝေးထွက်သွားကြပြီးယခုအချိန်တွင်လည်းအလွန်အားကောင်းနေသောကစားသမားများကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
အဆိုပါဖိုင်ဘာပလပ်စတစ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းရရှိသွားတဲ့။ အိုကေဒီ hack ကို Kasper Schmeichel မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်ဤ box ထဲတွင် Tati-Tiempos တစ်စုံရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်သူသတိထားမိသည်မှာသူသည်ရာဘာကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့်သူသည်ဖိနပ်များထဲသို့ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ အကယ်၍သာ သူကသူ့ဘွတ်ဖိနပ်တွင်လျှာကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖြစ်သည်ဆိုပါကသူသည်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်းကျောင်းမှအရူးများသည်လျှာနှင့်အတူပါလာသည်၊ သို့သော်ထုတ်လွှတ်မှုအချို့သည်မကြာသေးမီကရာဘာလျှာမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတွက် KasperSchmeichel Top TIinteractive ၏လှုပ်ရှားမှုပုံသဏ္thanksာန်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ သင်ဒီမှာတွမ်ကိုသူတွေ့နိုင်သည်မှာသူသည်အရှိန်မြှင့်စက်များကို elastic များပေါ်တွင်တင်ကြောင်းသူတို့တွင်ရှိခြင်းမရှိသောကြောင့်အလွန်ကောင်းသော hack လမ်းထွက်ရရန်န်းကျင်ရရန်။ အခုတော့ဒီ Runner's Loop လို့ခေါ်တဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပါ။ သင့်ရဲ့ boots တွေပြproblemsနာရှိရင်နည်းနည်းလေးရွှေ့ပြီးဒေါက်ဖိနပ်တစ်နည်းနည်းရရင်၊ ဒီလိုမျိုးတက်လိုက်ရင်ညာဘက်ကိုတက်လိုက်ပြီးကွင်းဆက်ကိုလုပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီးအခုနည်းနည်းဖြတ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။ Macy ကသူ့ဖိနပ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ထပ်မံလုပ်တာကြောင့်လူသိများတယ် လူအများစုမလိုအပ်သောဖိနပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိနပ်ကြိုးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာတစ်ခုရှိတယ်လို့ထင်ရင်တော့အပိုထပ်ဆောင်းလိုတယ်။ , လက်ျာလူငယ်ခန္ဓာကိုယ် griezmann ali suarez ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ၊ သင်အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်လျှင်သင်လည်းလုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သူတို့သည် gripsock မတိုင်မီသင်၏ခြေထောက်ဘွတ်ဖိနပ်တွင်မလှုပ်ရှားမီသင့်အမှတ်တံဆိပ်များစွာပေါ်လာသည်ကိုသင်သေချာစွာအကြံပြုသည်။ သငျသညျတိပ်, တိပ် designs ဒီဇိုင်းများငါတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါပြီ အစစ်ခံခြေအိတ်တွေရှိတယ်၊ ဒီမူရင်းတွေပါ၊ သူတို့မှာ Suarez နဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ Handles တွေရှိတယ်။ Aliat World Cup မှာခြေအိတ်တွေ ၀ တ်ထားတယ်။ အီတလီမှာကစားတဲ့ Socks Pro ဗားရှင်းကတော်တော်လေးပျော့ပျောင်းလွန်းတယ်။ hack ကစိတ်ကူးပါတယ်။
သင်ခြေဘ ၀ မှာဖိနပ်မစီးဘဲမနေစေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မလိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကမင်းဟာအရည်ကြည်ဖုတွေရနိုင်လို့ပါ။ သင်လုပ်နိုင်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဝန်ကိုထမ်းမယ့်အစား၊ သင်ဟာခြေအိတ်နှစ်စုံ ၀ တ်လို့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ဂျရုမ်းဘိုတိန်ဟာချောချောမွေ့မွေ့သောခြေအိတ်များမထွက်လာခင်လူသိများလာပြီ၊ သင်ဒီမှာကြည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ခြေနှစ်ချောင်းကို ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အချိန်တွင်ပင်ခြေနှစ်ချောင်းကိုသင်အမှန်တကယ် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဘွတ်ဖိနပ်တွင်ပွတ်တိုက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်အရည်ကြည်ဖုများလျော့နည်းပြီးဆိုလိုသည်မှာအရွယ်အစားဝက်ထက်ပိုကြီးနိုင်သည်။ soCoutinho ဖျာ Hummels ဟာဒီ hack ကိုသိပြီးမင်းရဲ့ဖိနပ်ထဲမှာအပေါက်တွေကိုဖြတ်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့ခြေချောင်းတွေမှာအရည်ကြည်ဖုတွေပေါက်ခဲ့လို့ကစားသမားစုံတွဲတစ်တွဲဟာသူတို့ရဲ့ဖိနပ်ထဲကအပေါက်ကြီးတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်တာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့ဘွတ်ဖိနပ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်လုပ်တဲ့နေရာမှာ Boot ရဲ့နောက်ကျောကိုသိသိသာသာအားနည်းစေတယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကအခုငါတို့နားလည်နေတဲ့နောက်ကျောကိုဖိအားပေးတာပါ။ သူက Haglund ပုံပျက်သောကြောင့် Pootie လုပ်ခဲ့တယ်။ အရာ၏နောက်ကျောအပေါ်တစ် ဦး အရိုးတိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ် တောင်ပို့။ ဒါဆိုသင့်မှာရှိရင်ဒါကသင့်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာတခြားသူကိုဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။
တကယ်တော့ Coutinho က BC Boots UK ကိုပြသတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပြုပြီးဘွတ်ဖိနပ်ကိုလုပ်လေ့အကျင့်လုပ်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဖနောင့်ကသူ့ဖိနပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်နူးညံ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေ့နေရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံ soft soft ဘွတ်ဖိနပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမယ့်ယေဘူယျအားဖြင့်သင်ဟာ Haglund ရဲ့ပုံပျက်သောအရာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိသူတစ်ထောင်လျှင်တစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်လိုလားသူကစားသမားများအတွက်တကယ်ကောင်းသည်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အတွေးဖြစ်သည်။ သင်သိသောမင်းရဲ့ဘွတ်ဖိနပ်ကိုပျက်စီးစေပါ၊ ဒီ hack က ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာလူကြိုက်များလာတဲ့အကြောင်း Neymar Sancho Walker Danny Rose ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားသမားအတော်များများကဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် Sox အနည်းငယ်ပိုမိုတင်းကျပ်လာပြီးပိုကောင်းလာတယ် သူတို့ကဂိမ်းရဲ့အဆုံးကို ဦး တည်နေတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအယူအဆဟာ carbs ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဖိအားကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံဒီforရိယာရှိကစားသမားတွေအတွက်ပိုမိုတင်းကျပ်လာပြီးသင်၏ခြေအိတ်ထဲမှာအပေါက်သေးသေးလေးတွေဖြတ်တောက်နိုင်တာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာလယ်ကွင်းမှာအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံများကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီဒေသမှာဖိအားကိုခင်ဗျားစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါကအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကကစားသမားတွေကိုနားထောင်ပြီးသူတို့ရဲ့ခြေအိတ်တချို့ကိုသိပ်မတင်းကျပ်တဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဖိအားမှသက်သာစေရန်နွားသငယ်areaရိယာတွင်၊ ခြေနင်း၌အပေါက်များပေါက်နေသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်၊ ကစားသမားများသည်သူတို့၏ခြေအိတ်အောက်၌ရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ နေမာအပေါ်တွင်လည်းအဝတ်အစားများကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ငါတို့တွေ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်ငါတွင်းထဲထည့်ပြီးရိုးသားဖို့အတွက်ဒါဟာတကယ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အဆုံးခံစားမှုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါဟာခန့်မှန်းရခက်တဲ့အတွေးမဟုတ်ဘဲသင့်ရဲ့ခြေအိတ်တွေကိုသိသိသာသာဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်။ မင်းလုပ်နေလား လုပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကောင်းတယ်၊ ဒီ hack ကရေနံဂျယ်လီ (သို့) chafing anti-chafing balm တစ်မျိုးပါ။ မင်းမှာဘွတ်ဖိနပ်အသစ်တွေရှိတယ်၊ မင်းသူတို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ် ၀ တ်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာမင်းသိပြီဆိုရင်သင်လုပ်တဲ့အရာကသင်ရေနံဂျယ်လီကိုပူပြင်းတဲ့နေရာတွေမှာသိုလှောင်ထားခြင်း (သို့) ဖောင်းပွမှုဆန့်ကျင်ရေး - balam များလေ့ရှိတာကိုသေချာစေပြီးဘာလဲ ဖြစ်ပျက်လာမှာက ၀ တ်နေစဉ်ပွတ်တိုက်နည်းတာကိုဆိုလိုသည်။
မင်းကြိုးစားခဲ့တာ Hack ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘယ်လိုထင်လဲအနာဂတ်မှာငါတို့ကိုကြိုးစားချင်တဲ့ hack တွေအားလုံးကိုဘောလုံးကစားခြင်းကိုကြည့်ပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တစ် ဦး မတရားသောအခြေခံအလွှာကဘာလဲ?
Wicking။ တစ် ဦး ၏အရေးအပါဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုမှာအောက်ခံအလွှာ၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်မီးခိုးများအစိုဓာတ်ကိုပယ်ရှား။ လိုပဲမီးခိုးများဆီမီးခွက်တစ်ခုတွင်ဤဖြစ်စဉ်တွင်သင်၏အရေပြားမျက်နှာပြင်မှချွေးများကိုထုတ်ယူပြီးနောက်၎င်းသည်နောက်တစ်ဆင့်သို့ရွေ့လျားနိုင်သည့်အထိယင်း၏အရှည်တစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းသွားသည်။အလွှာအဝတ်အစား၏။
အမျိုးသားအပူအအေးခံဗွီဒီယိုလမ်းညွှန် - ရာသီဥတုအလွန်အေးသောအခြေအနေ - ပူနွေးသောအတွင်းခံအဝတ်အစားဟီ! ငါက Antonio Centeno ပါ။ Real Men Real Style ကိုတည်ထောင်သူပါ။ ဒီနေ့ငါ Thermal Underwear အကြောင်းပြောမယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကငါ့ရဲ့အပူခံအင်္ကျီကိုဝတ်တယ်။ သင်ထိုသို့မပြုလုပ်သေးပါကကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ။
ဤသည်မှာဤဆောင်းပါးများကိုသင့် inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်လျှင်၊ ၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိပါက၊ ရှေ့သို့ သွား၍ အောက်ဖော်ပြပါ 'Like' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိစေတယ်။ Youthink ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါပြောနေတာတွေအကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါအကြံပြုချက်တွေပို့ဖို့တွန့်ဆုတ်နေတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ငါအမြဲတမ်းသင့်ကိုဆောင်းပါးထဲမှာပြောခဲ့တာတွေကိုထောက်ခံတဲ့အသုံး ၀ င်တဲ့ဆောင်းပါးနဲ့အမြဲချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်အပူခံအဝတ်အစား၊ ဒါကအခြေခံအလွှာရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်မသိခဲ့ပါကရာသီဥတုအေးသောအချိန်တွင် ၀ တ်ဆင်သည့်အခါအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။ သင်အခြေခံ layer ကိုလိုချင်သည်၊ သင်၏အလယ်အလတ်အလွှာ insulator တွင်လည်းလိုသည်။ အပြင်ဘက်အကာအကွယ်အလွှာကိုသင်လိုချင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။ အပူအတွင်းခံအဝတ်အစား။
သင့်ရဲ့အပူခံအဝတ်အစားနှင့်အတူသင်ယခုဂုဏ်သတ္တိများလေးရှာဖွေနေကြသည်။ ဤရွေ့ကားလေးဂုဏ်သတ္တိများနေသောခေါင်းစဉ်: 1. ဒါဟာအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ၂ ။
ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဖြစ်နှင့်အအေးမှသင်တို့ကို insulator တွင်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ၃ ။ ၄ ။
ဘက်တီးရီးယားပိုးခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မုဆိုးများနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအိမ်ပြင်တွင်ရှိနေသောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်ဘက်တီးရီးယားများစုဆောင်းခြင်းကိုသင်မလိုလားပါ။ ခွင့်ပြုပါ။ မင်းတို့ငါထင်တာကိုအရေးအကြီးဆုံးပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ပြောတဲ့အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်တယ်။
မင်းဝါဂွမ်းကိုရှောင်ချင်တယ်။ ချည်သည်မီးမဖောင်းနိုင်ပါ။ သင်ကဂွမ်းရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားလျှင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဝါဂွမ်းရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ပါက၎င်းကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ကအလွှာသုံးခုဖြင့်ဝတ်ဆင်။ အပြင်ဘက်တွင်အအေးခံ။ သင်ကမုန်တိုင်းအတွင်း၌ချွေးထွက်စေသည့်အခါမဟုတ်ပါ၊ t ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်ပေါ်ကိုနှင်းလျှောစီးနှင်နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်း။ ကောင်းမွန်သောအနေအထားအတွက်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အထူးပြုလုပ်ထားသောအထည်အလိပ်များဖြစ်သည့်အထူးဒီဇိုင်းနှင့်ချုပ်တည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုဓာတ် (သို့) သိုးမွှေးပျောက်ရန်စားပါ။
သိုးမွှေးတော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်။ Icebreaker လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိတယ်။ အပူအအေးခံပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ ကာရယ်လ်ဒေးဗစ်အားကစားဝတ်စုံကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်
သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်အရသူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအပူခံအဝတ်အစားများဖြစ်သော်လည်းသင်နောက်ထပ်ရှာဖွေနေသည်မှာ၎င်းသည်အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သောဂုဏ်သတ္တိရှိရန်သေချာစေသည်။ အတွေ့ရဆုံးအရာကတော့သိုးမွှေးဒါမှမဟုတ်သိုးမွှေးရောစပ်ခြင်းပါ။ REI ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်ဤအရာကိုအထူးပြုသည်။ သင်သည်သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များထဲမှတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနိုင်သည်၊ သို့သော် ထပ်မံ၍ အစိုဓာတ်ထိန်းနိုင်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဟာအစိုဓာတ်အများကြီးတည်ဆောက်နေပြီးသင့်တွင်အလွှာများနှင့်အလွှာများရှိပြီး၎င်းတို့သည်အကာအရံများနှင့်သုတ်သင်နိုင်သည့်အလွှာအတွင်းသို့ပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်လုပ်လိမ့်မည်။ အဲဒီချွေးတွေထွက်လာပြီးမင်းအရေပြားဘေးမှာစိုစွတ်လာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည်လေထဲသို့ ၀ င်သည့်အေးသောလေမျိုးသို့မဟုတ်သင်ဖွင့်ကောင်းဖွင့်လျှင်၊ သင်၏အပူချိန်ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားပြီးသင်ချက်ချင်းအငွေ့ပျံနိုင်သည်၊ သင်၏အရေပြားပေါ်တွင်ရေခဲပင်ဖြစ်သည့်အတွက်သင်မလိုချင်ပါ။ အထူးသဖြင့်အပြင်ဘက်ကိုပြန်လာပြီးအလွန်အမင်းမုဆိုးဖြစ်တဲ့အခါမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အခါ - သင်ဟာရုတ်တရက်သင်ဟာမလှုပ်ရှားနိုင်တော့တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒါကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်နည်းနည်းပဲ။
Loft သည်သင်ရှာဖွေလိုသောနံပါတ်နှစ်ဖြစ်သည်။ Loft သည်ထည်ကိုချုပ်ရိုးချုပ်။ လေထဲတွင်ချုပ်ထားသောကြောင့်အပူရှိန်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးအအေးအပူမရှိခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတွင်ကောင်းသောခေါင်မိုးရှိလျှင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်အပူကိုသိုလှောင်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်၎င်းပစ္စည်းများစွာသည် ၀ တ်မပါ ၀ င်သည့်အပြင်သင့်ကိုနွေးထွေးစေမည့်ဒေါ်လာ ၁၅-၂၅ ဒေါ်လာတန်ယူနီယံဝတ်စုံကိုစစ်ဆေးသည်။
ဒီဂရီ ၅၀ ဒီဂရီမှာအပြင်ဘက်မှာရှိပြီးသင်ဟာမစ်ချီဂန်တက္ကသိုလ်ဘောလုံးပွဲမှာထိုင်နေတာမဟုတ်ဘဲလှုပ်ရှားနေတယ်။ အသင်းအနေဖြင့်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်ရွေ့လျားပြီးချွေးထွက်အောင်လုပ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်မဟုတ်ပါ။
အပူကိုထိန်းထားလိမ့်မယ်။ နောက်တဖန်သူကအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ခေါင်မိုးမရှိဘူး
မစမ်းပါနဲ့။ တတိယအချက်ကဆန့်ထုတ်မယ့်အရာဖြစ်ပြီးဒါကဝါဂွမ်းကျပြန်ကျတယ်။ လုပ်တယ်
ဒါဟာတကယ်ကိုလမ်းပိုင်းအများကြီးမရှိပါ။ သငျသညျလေးလမ်းလမ်းပိုင်းရှိကြောင်းတစ်ခုခုချင်တယ်။ ဒါကြောင့် Malden Mills က Polartec Power Stretch လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါကအရမ်းကောင်းတဲ့အရည်အသွေးပဲ။
ဤသည်ကား Carol Davis Sportswear ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဤသိုးမွှေးသည်သင်ရှာဖွေလိုသောဆန့်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ Icebreaker သည်အခြားကောင်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းကမင်းကိုနည်းနည်းလောက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းနဲ့အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ရင်အဲဒီ hotspots တွေရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကအမဲလိုက်ခြင်းကိုခံနေရပြီးသင်အများကြီးလှည့်ပတ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်သင်ပြေးနေပြီးအပူခံအဝတ်အစားတွေကိုဝတ်မယ်ဆိုရင်အနီရောင်အစက်အပြောက်တွေစတင်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးအရေးမကြီးဘူး။
ငါဆိုလိုတာကမင်းကပိုချွေးထွက်မှာပေါ့။ မင်းကနာတာနဲ့နာကျင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ သင်သည်အလွှာများဖြင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်ကြိုးစားပါကလေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တကယ့်ကိုမသက်မသာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မဟာတင်းကျပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ပေးလို့ stretch ကိုအထူးသဖြင့်နှစ်သက်ပါတယ်။
ငါဒီမှာငါ့လက်တိုပေါက်လေးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်တခြားအဝတ်အစားတွေဝတ်နိုင်တယ်၊ ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိဘူး၊ အလားတူပြissuesနာမျိုးမရှိဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဘက်တီးရီးယားခံနိုင်ရည်ရှိတာကြာပြီ၊ ရှည်လျားပြီးကြာရှည်စွာအရေပြားဘေးမှာဒီဝတ်ထားတာ၊ ငါကရက်နဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေကိုပြောတာ။ ကျနော်တို့သင်တန်း၏ဘက်တီးရီးယားဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နေ့တိုင်းရေချိုးကြသောကြောင့်သင်ဂရုစိုက်သည်၊ သို့သော်သင်နေ့စဉ်မရေချိုးနိုင်သည့်အခါသင်နေ့စဉ်ဘက်တီးရီးယားများကိုမလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါဘက်တီးရီးယားကိုခုခံတွန်းလှန်သောတစ်ပတ်ပတ်လုံးဝတ်ဆင်ထားသည့်အပြင်ခန္တာကိုယ်၌ပြproblemနာမရှိသောကြောင့်အပူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်၎င်းသည်ငါလုပ်ရန်လိုသည့်အခြေအနေများတွင်ရှိသည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများကိုဆန့်ထုတ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။
လေးယောက်လုံးရရန်သင်ဒေါ်လာ ၁၅-၂၅ ထက်နည်းသောငွေကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းထိုက်တန်သည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။ ငါ့မှာဒီဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီးဒီဝတ်စုံကိုဝတ်ဖူးတယ်။ မင်းကအပူခံအင်္ကျီတွေ ၀ ယ်တဲ့အခါစွမ်းအင်ကိုကယ်တင်ချင်လို့ပါ။ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအလွှာဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ အပြင်ဘက်အလွှာဘေးမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သင်ငြင်းခုန်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသင်လိုချင်တာများ၊ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ရှိချောချောမွေ့မွေ့သောအရာတစ်ခုအတွက်အပိုဆုကြေးတစ်ခုရရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်အတွင်းခံအဝတ်အစားများဝတ်နိုင်သည်။
ကောင်းပါပြီ၊ ဤအရာများသည်သင်လုံးဝမဖြစ်မနေထားရမည့်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအရည်အသွေးများဖြစ်သည်။ သင်အပြင်ထွက်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောအမျိုးသားအပူခံအဝတ်အစားများကိုဝယ်သည့်အခါသူတို့ကိုသတိထားပါ။ သတိထားပါ။
ဒါက Antonio Centeno ကို Real Men Real Style နဲ့အတူပါပဲ။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
TO သို့အောက်ခံအလွှာတစ် ဦး ၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည်စက်ဘီးစီးသည်ဗီရိုနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်ဗီရိုနှင့်အဝတ်အထည်များအဓိက ၀ တ်ဆင်သည်။ အရေပြားဘေးတွင်ထိုင်ကာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးသည့်အပြင်ချွေးများထွက်လာသည်။ ဆောင်းရာသီစီးရီးများ၌ဆောင်းတွင်းစီးခြင်းနှင့်နွေရာသီတွင်အေးစေခြင်း။
Theအလွှာသင့်အသားအရေနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေသောအဝတ်အစားများသည်အပူလွန်ကဲခြင်းမှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝကာကွယ်မှုများကိုကူညီသည်။ 'သင်၏အသားအရေပေါ်တွင်စုဆောင်းနေသောချွေးများကိုသင့်အားသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိနိုင်ရန်အတွက်ယက်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ ဝတ်ဆင်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အောက်ခံအလွှာအားလုံးရာသီဥတု၌တည်၏။
သငျသညျ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အခြေခံ layer ကိုဝတ်ဆင်နိုင်ပါသလား?
အကယ်၍အေးပြီးတောက်ပနေသည်ဝတ်ဆင်နှစ်အလွှာ၏အောက်ခံအလွှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူ၌ထောင်ချောက်ရန်။ ပူသောနေ့ရက်ကာလ၌တစ် ဦး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အခြေစိုက်စခန်းအလွှာလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်းများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသောကြောင့်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်မင်းအေးတယ်
မြှုပ် roller တကယ်အလုပ်လုပ်ကြသည်
ထဲမှာNFLသို့သော်ကစားသမားများအခြေစိုက်စခန်းအလွှာပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာလိဂ်၏စာချုပ်ကိုလိုက်နာရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဆိုလိုသည်ဝတ်ဆင်Sports Illustrated အရအများဆုံးအပူကိုကာကွယ်ရန်နှင့်နွေးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် Nike Hyperwarm Flex သည်
ဝတ်ဆင်တင်းကျပ်သောလျောက်ပတ်သောအောက်ခြေအလွှာသည်ကြွက်သားလှုံ့ဆော်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးကြွက်သားများကိုလိုင်းအတွင်းထိန်းထားနိုင်သည် ၎င်းသည်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဤအလှည့်သည်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြွက်သားပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်ဘောလုံးသမားကြာကြာကစားနှင့်ပိုလေ့ကျင့်ရန်။ ခြေရင်းအလွှာများတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းသည်ချွေးများကိုစုပ်စေသည်။
အများဆုံးထိရောက်မှုကိုသေချာစေရန်,အခြေစိုက်စခန်းအလွှာသင့်ပါတယ်တပ်ဆင်မထားပါနှင့်ချောင်။ အကယ်၍ ထည်နှင့်သင့်အသားအရေအကြားကွာဟချက်များရှိပါကအအေးမိခြင်းသည်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖွယ်ရှိသည်။ အမြဲတမ်းသင်၏အမှန်တကယ်အရွယ်အစားကိုရှာဖွေပါ။အခြေခံအလွှာ၎င်းတို့ကိုပုံမှန်တီရှပ်များထက်အနည်းငယ်သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်တပ်ဆင်ထားသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။10.28.2013
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ အကယ်၍ သင်သည်အပူချိန်နိမ့်ပြီးသင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ပါက၊အခြေစိုက်စခန်းအလွှာရှိသည်ဖို့ကောင်းလှ၏။ ဆိုလိုသည်မှာရွေ့လျားနေစဉ်နွေးနေလျှင်ပင်၊အခြေစိုက်စခန်းချွေးရေပုံးမှအအေးမခံရန်အလွှာသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။04.11.2016
ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် Skos Layer အသစ်သည် Assos မှယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသီးခြားအခြေစိုက်စခန်း ၆ ခုစုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။
Skos Layer အသစ်သည် Assos မှအသစ်သောအထီး ၆ ခုစုဆောင်းထားပါသည်။ မည်သည့်အခြေအနေမဆိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းသည်။ Assos သည်၎င်း၏အဝတ်အစားများစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရာများအားအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားစွာပြုလေ့ရှိပြီး၎င်းသည် Assos Layering System ဟုခေါ်သည့်အရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုဒီဇိုင်းလုပ်ခြင်းထက်အမြဲတမ်းကွဲပြားသည်။
ကိစ္စရပ်များကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေရန်အသစ်စက်စက်သည်အလွန်ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်စီးနင်းရန်အတွက်နွေရာသီ၊ နွေ ဦး၊ ဆောင်း ဦး ရာသီ၊ ဆောင်းရာသီနှင့်နောက်ထပ်နက်ရှိုင်းသောဆောင်း (Ultraz) အခြေစိုက်စခန်းတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသောပစ္စည်းလေးမျိုးရှိသည်။ သင့်အတွက်အကြံပြုထားသောဗွီဒီယိုများ